Manasitrana i Jesôsy (Mat. 12:15-21)
Tantara marobe no maneho ny fahagagana nataon'i Jesôsy ao amin'ny Baiboly. An'arivo taona mialoha ny nisehoan'izany dia efa niresaka momba izany fahagagana izany i Isaia. Nampahiratra ny jamba Izy, nanasitrana ny marary; nisy ny narary nandritra ny taona maro izay nositraniny (vakio ny Mar. 5:24-34; Jao. 5:1-15). Nampandeha indray ny malemy Izy, nanadio ny boka koa fotsiny ihany fa nikasika azy na dia "tsy madio" aza izy ireo; tamin'ny demonia izay nifehy ny saina sy ny vatany Izy, ary koa aza.
Mety hieritreritra isika fa natao hanintonana ny vahoaka sy hanaporofoana ny fahefany amin‘ireo mpisalasala sy mpitsikera ireo fahagagana ireo, kanefa tsy izany mandrakariva. Matetika aza i Jesôsy no nanome toromarika ny olona izay nositraniny mba tsy hilaza amin'iza na iza ny amin'izany. Na dia tsy nanaraka mandrakariva ireny toromarika ireny aza ireo olona vao avy nositraniny ka tsy nihazona ny vaovao mahatalanjona ho an'ny tenany samirery, dia niezaka hatrany i Jesôsy naneho fa ireny fahagagana ireny dia mifono zava-manan-danja tokoa fa tsy ho fisehosehoana tsy akory. Ny handraisan’ny olona ny famonjena ao Aminy no tanjona fara tampony amin’izany.
Fanehoana fangorahana ny fahagagana momba ny fanasitranana nataon'i Jesôsy. Izao no nambaran'i Matio ny amin'ny fotoana nialoha indrindra ny namahanan'i Jesôsy ireo olona 5000: "Ary nony nivoaka Jesôsy dia nahita vahoaka betsaka, ary onena azy ka nahasitrana ny marariny." - Mat. 14:14. Tsapany ny fahorian'ireo izay mijaly, ary nanao izay azony natao Izy mba hanampiana sy hanondrotana ireo izay nifampikasoka taminy.
Vakio ny tenin'i Isaia ao amin'ny Mat. 12:15-21. Mihoatra noho ny fanasitranana ny marary ny fahagagana nataon'i Jesôsy inona koa no nataony rehefa nanasitrana Izy?
"Ny fahagagana rehetra nataon'i Kristy dia famantarana ny maha-Andriamanitra Azy. Ny asa nambara mialoha fa hataon'ny Mesia indrindra no nataony; ho an'ny Fariseo anefa dia tena fanafintohinana mazava ireny asam-pamindrampo ireny. Tsy niraika sady tsy nangoraka ny mpitarika Jiosy nijery ny fahorian'ny olombelona. Ny fitiavan-tenany sy ny fampahoriana nataony matetika no nahatonga fijaliana izay nositranin'i Kristy. Koa noho izany dia fanomezan-tsiny ho azy ireo ny fahagagana nataony."- IFM, t. 434,
Nampiseho ny fitiavan'i Jesôsy ny fanasitranana mahagaga marobe nataony, naneho ihany koa izany fa marina sy malemy fanahy Izy ary tonga mba hamonjy ireo izay nositraniny. Izay nataony rehetra dia nataony mba hitarihana ny olona handray ny fiainana rnandrakizay (vakio ny Jao. 17:3).